बाबुरामले भनेको कुरा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । « Post Khabar
बाबुरामले भनेको कुरा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।
Published on: 23 May, 2020 1:12 pm
माक्र्सले भनेको अर्थतन्त्रले पनि काम नगर्ने रहेछ, युरोप अमेरिका जस्तो अर्थतन्त्रले पनि काम नगर्ने रहेछ । हामी अर्थतन्त्रलाई धेरै जोड दिदा रहेछौ, तर मुख्य कुरा त मानव जीवन रहेछ । त्यस कारण अब अर्थतन्त्रको नयाँ स्वरुप खोज्नु पर्ने भएको छ । कस्तो खालको अर्थतन्त्र आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरामा अब हामीले गम्भीर रुपले सोच्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । बाबुराम
यस्तै मान्छेलाई म धृत भन्ने गर्छु । किनकी यिनको आफ्नो कुनै चेत छैन, सिद्धान्त छैन, हिंड्ने बाटो प्रष्ट छैन । आकाश देखे धर्ती ठीक भन्ने, धर्ती देखे आकाश ठीक भन्ने यिनको प्रवृति हो। यस्ताले मान्छेलाई आफ्नो निजी स्वार्थमा नयाँ नयाँ कुरा गरेर अनन्तसम्म बिना उपलब्धी लडाईं रहन्छन । सर्बहारा अधिनायकवादी सत्ता र साम्यवादी अर्थतन्त्रको नाममा ४० बर्षसम्म नागरिकलाई भुलाए यिनले । त्यसको नाममा १७ हजार मान्छेको ज्यान गएको युद्ध घोषणा गरे ,आफु पदमा पुग्ने देखेपछी परिस्थिती बदलियो भन्दै लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट बन्न आए , लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट बन्दा आफु भाले हुन नसक्ने देखेपछी कम्युनिष्ट सिद्धान्त बेठिक भन्दै राजनितिमा सडेगलेकाहरु भेला गरेर नयाँ शक्तिको नाटक मन्चन गरे । कम्युनिष्टहरु एकताबद्ध हुन आटेको देखेपछी हत्त र पत्त भाग पाउछु कि भनेर राष्ट्रिय सभागृहमा पुग े। कुरो बुझ्दै ल्याउदा आफुले टन्न भाग नभेट्ने बुझेपछी त्यसलाई सराप्दै भरपर्दो पार्टी कांग्रेस हो, कम्युनिष्टहरु ठग हुन भन्दै, ढाडमा चढेर एकसिटे सांसद बने । मैले त यिनी माओवादी छोडेर नयाँ शक्ती बनाउने बित्तिकै बाबुराम अन्तत मधेशी पार्टीमा पुग्छन भनेको थिए, उतिबेला सामाजिक सन्जालमा मैले सम्प्रेषण गरेको हेरे थाहा हुन्छ । अन्तत बन्दूकको नालबाट सर्बहारा सत्ता स्थापित हुन्छ भनेर राजनीति (देखाउने) सुरु गरेका बावुरामले उपेन्द्र यादबको पाउबाट समाजबाद आउछ भन्ने कुरा दुनियाँलाई पढाईरहेका छन।
ऋषिकेश शाहको सिफारिसमा भारत पढ्न गएका बावुराम पढाई सकेर आएपछी पञ्चायतमा दरवारिया विश्वास पात्र उनै ऋषिकेश शाहको मानवाधिकार संगठनको सदस्य बनेर काम गरे । त्यहा बसेर भन्दा कम्युनिष्टमा छिराएर नेत्रित्वसम्म पुर्याउने र कम्युनिष्टहरुमा अर्को केशरजङ उत्पादन गर्ने दरवारीया रणनिती अनुसार बावुरामले अनेकन पार्टी फेर्दै फुटाउदै नेत्रित्व को खोजिमा तल्लिन रहे । सारा प्रयास गर्दा पनि एउटा सानो गुटको मात्रै नेता बन्न सकेका बावुराम पछी प्रचन्डहरु सँग मिलेर जनयुद्ध तिर लागे हिंडे । आफु सम्मिलित मदन भन्डारी प्रमुख वक्ता भएको कार्यक्रममा बावुराम एकटहले मदन भण्डारीलाई हेरिरहन्थे । मदन भण्डारीको खुबी र लोकप्रियता देख्दा बाबुराम मनमनै कुन्ठिएको, छटपटिएको अनुमान लगाउने म मात्रै थिए कि अरुपनी थिए, थाहा भएन । तर उनको डाह अनुहारमै छचल्किन्थ्यो। माओवादीमा रहदा प्रचण्डलाई उछिनेर नेता हुन नसक्दा युद्ध कालमै प्रचण्ड बावुरामको घमाशान परेको थियो। प्रचन्डले त बाउरामलाई रोल्पाको डाडोबाटै डम्पिङ गर्ने योजना समेत बनाएका थिए भनिन्छ , पछी आत्मआलोचना गराएर छोडिदिएका हुन। लोकतन्त्र आएपछी जातिय क्षेत्रिय आधारमा संघियता निर्माण गर्ने मिसनमा लागेका बावुराम अन्तत सफल नबनेपछी कम्युनिष्ट सिद्धान्तै ठीक छैन भनेर उछिट्टिये । ६३ सालमा लोकतन्त्र आएपछी पनि बावुराम बेबी किङको कुरा गर्दै थिए । ज्ञानेन्द्रको नातिलाई भएपनी राजा थाप्नु पर्छ भनेका हुन उनले (त्यती बेलाको उनको अन्तरवार्ता सुने पढे हुन्छ)। राजतन्त्रै समाप्त भएपछी केसरजङग बन्ने बाटो बन्द भो । र उनी अन्तत उपेन्द्र यादबमा पुगेर उनको राजनीति बिसाएका छन, यिनको अन्तिम गन्तब्य त्यही हो भन्ने बिष्लेषणका आधारमा मैले बाबुराम अन्तत मधेशी पार्टीमा पुगेर जोतिन्छन भनेको हुँ । त्यही पुगे र अझै पनि कोरोना देखाएर संसारका सबै सिद्धान्त काम नलाग्ने भो, नयाँ सोच्नु पर्ने बेला भयो भनेर नागरिकलाई कुहिरोको काग झै उडाउन खोज्दैछन। भारतले मिचेको हाम्रो भुभाग लिपुलेक कालापानी, लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन सरकारले दर्हो अडान लिएपछी बाबुरामहरु छट्यपटाएका छन र भन्दैछन ( कोरोनाले मान्छे नरहे “पहाड मात्रले“राष्ट्र बन्ला ? हाम्रो सार्बभौम सत्ता र राष्ट्रिय अस्मिताको सवाललाई गौण देखाउन, यो केहीपनी हैन भन्ने पार्न यससँग कही कतै सम्बन्धित नहुने, नजोडिने र हामीले कठिन रुपमा ब्यहोर्दै आएको कोरोना महामारिलाई किन जोड्न खोज्दैछन बाबुराम भन्ने कुरा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । केही समय अघी सिमा बिबादमा सरकार किन सुतेर बस्यो? भन्ने बाबुराम अहिर्ले सरकारले नियतबस सिमाको बिषय उठाएर कोरोनाबाट आक्रान्त जनताको ध्यान मोड्दैछ ‘भनेर सार्बभौमिकता माथि मजाक गरिरहेका छन । यो भनेको मुलुकमा कहिल्यै स्थिरता आउनु हुन्न, यो वा त्यो नाममा जनता लडाईंरहनु पर्छ, भुल्याइरहनु पर्छ र यो मुलुक जर्जर बनाएर सिक्किमिकरण गर्नु पर्छ भन्ने हो, उनका मालिकले उनलाई थमाइदिएको गृहकार्य पनि यही हो। सचेत रहौ